Home vato nasondrotry Gianni Infantino tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Elite Football iray izay malaza amin'ny anarana "Slab". Ny Gianni Infantino tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zava-misy hafa (kely fantany) momba azy.
Eny, mahafantatra ny anjara toeran'ny filohan'ny FIFA ny rehetra. Na izany aza, vitsy monja no mihevitra ny Bio Bio Gian Infantino izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Ny anarany feno dia Giovanni Vincenzo Infantino. Heverina ho fantatra ihany koa izy "Gianni". Teraka tamin'ny andro 23rd tamin'ny 1970 tamin'ny volana marsa i Infantino tao amin'ny distrikan'i Brig, any amin'ny faritanin'i Valais, any Soisa. Teraka tamin'ny rainy, Vincenzo Infantino (mpandraharaha italiana) izy ary Maria Minolfi reniny (mpanampy Italiana).
Ny infantino dia avy amin'ny fianakaviana fianakaviana mpifindra monina. Teraka tamin'ny mpifindra monina Italiana izy izay tonga tany Suisse avy any Calabria, toerana misy azy Nanomboka ny dia ny mpifindra monina ary Lombardy, toerana misy azy Nanomboka ny dia ny fifindra-monina ny reny. Ny fahazazàn'ny Young Infantino dia niharan'ny tsy fisian'ny vola na dia eo aza ny ezaka nataon'i Vincenzo Infantino mba hametrahana raharaham-barotra miorina amin'ny toeram-ponenany vaovao.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fitiavana ho an'ny fanabeazana
Na dia teo aza ny olana ara-bola niainan'ny fianakaviany, ny ray aman-drenin'i Gianni Infantino dia afaka nanohana ny fanabeazana fototra sy sekoly ambaratonga faharoa. Raha mbola tany an-tsekoly, ny Young Infantino dia nanolo-tena hianatra sy hihazona safidy malalaka mikasika ny safidy momba ny asa.
Tao anatin'ireo fahafaha-manao maro izay nomanin'ny sekoly ny fandraisana anjara amin'ny tanora izay novidin'i Infantino tamin'ny filalaovana baolina an-tapitrisany. Tsy nokolokoloiny na oviana na oviana ny eritreritra ny handeha amin'ny akademia football. Ny fianakavian'i Infantino dia mino fa nanome lanja bebe kokoa ny fanabeazana izy, tsy toy ny football.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Lalana mankany amin'ny baolina kitra
Na dia tia baolina kitra aza ny Infantino ary nahasarika ny fanatanjahantena. Na izany aza, tsy nanana talenta niavaka izy, fivoarana izay nahatonga azy hitady fomba ahafahana mandray anjara amin'ny fanatanjahantena raha tsy mpilalao matihanina. Drafitra tsara natao izany.
Ny fomba niheveran'i Infantino ny fikasany hiditra amin'ny fitantanana baolina kitra dia nofaritana ho 'voavidim-bola'. Raha tokony handeha ho any amin'ny akademia izay tsy nanana talenta izy, dia nanapa-kevitra ny handalina ny sampana iray i Infantino lalàna izay mifandray amin'ny Football Governance. Nisoratra anarana izy ao amin'ny Oniversiten'i Fribourg Taiza no nahazoany mari-pahaizana momba ny lalàna taorian'ny fianarana taona.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ahoana no nahatonga azy ho filohan'ny FIFA
Taorian'ny nahazoany mari-pahaizana tao amin'ny Oniversite, dia tsy nanam-potoana hamantarana ny fitiavany tanora i Infantino. Tamin'ny alàlan'ny fahaiza-manaon'ny lalàny dia nanao ny asany ho Mpanolo-tsaina ara-dalàna ao amin'ny fikambanan'ny baolina nasionaly manerana an'i Eoropa izy.
Nanazava ny varavarany i Fame rehefa niditra tao amin'ny UEFA tao amin'ny 2000 izy. Natao ny sekretera jeneraly tamin'ny volana oktobra 2009 taorian'ny naha-solombavambahoaka azy nandritra ny roa taona. Mandroso haingana mankany 2015, i Infantino dia nandray ny fanohanan'ny Kaomity Mpanatanteraka UEFA hisolo tena ny alahelony, Sepp Blatter ao amin'ny Kongresy tsy mahazatra 2016 FIFA. Nipetraka ho an'ny lehibeny ny famaritana ny fiovana. Nomen'i Infantino izany fahafahana hanambara ny kandidany ho filoham-pirenena izay nandresy tamin'ny fomba mahagaga. Indro, tamin'ny 26th of February 2016, Infantino no lasa Italiana voalohany nihazona ny fiadidian'ny FIFA.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Na dia tsy misy rakitsary momba ny fiainan'ny fifandraisan'ny Infantino aza. Na izany aza, misy ny fomban'ny fomba fijerin'ny Italiana-Soisa ny fitiavany ny ainy, vehivavy Libaney, Leena Al Ashqar. Nihaona tamin'i Leena (sary 2018 etsy ambany) i Infantino, ary teo am-piandohan'ny 2000 dia nanao ny andraikiny ofisialy tao amin'ny federasiona football Libane izy.
Samy nifankatia ny roa tonta tamin'ny fihaonany voalohany noho ny fifanakalozan-dronona mitovy amin'ny baolina kitra. Ny mpivady dia ankizivavy efatra vavy (sary etsy ambany miaraka amin'ny maman) azy ireo; Alessia, Sabrina, Serena ary Dhalia.
Ny zanakavavy efatra dia ampahany manan-danja amin'ny fianakavian'i Gianni Infantino.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mpinamana miaraka amin'i Papa
Tsy misy fetrany ny fisakaizany. Ny Gianni Infantino dia nanolotra ny Papa, fanangonana manokana izay manome ny laharana 9 mandritra ny fivoriana iray ao amin'ny Vatican (Catholic Herald Report). Ny fisakaizana amin'i Pope Frances dia afaka manolotra ny soso-kevitr'i Gianni Infantino, mety ho avy amin'ny tantaram-pianakaviana katolika momba ny fianakaviana.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ny endriny-mitovy
DailyMail Indray mandeha dia nilazalaza ny Gianni Infantino tahaka ny "Hood" ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny "Nahoana no manandrana ny hamono baolina kitra ny mpilalao enjehina UEFA, Gianni Infantino?"
Na izany aza, rehefa avy nandinika tsara dia maro ireo mpamaky no manaiky fa ny endrik'i Infantino dia mitovy The Hood - sary etsy ambony. The Hood no fahavalo lehibe sy fahavalo an'arivony Thunderbirds Tantara mitohy amin'ny tele.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Manaporofo an'izao tontolo izao
Raha ny momba ny fiainan'ny tenany manokana Gianni Infantino dia tena manenina tokoa ny zava-misy fa tsy nandeha tany amin'ny academy football mihitsy izy. Raha nahatratra ny anjara andraikitry ny FIFA dia nanapa-kevitra ny hanaporofo ny tsy fahombiazan'izao tontolo izao i Infantino amin'ny fampisehoana ny fahaizany baolina kitra.
Ny fanapahan-kevitr'i Infantino amin'ny fampiharana baolina kitra miaraka amin'ireo namana dia tonga tamin'ny fanararaotan'ireo mpankafy baolina kitra ny sehatra 0 on-field. Ireo mpankafy azy ireo dia voaporofo fa diso rehefa nahita sary sy lahatsary maro momba ny fahaizana baolina kitra Infantino.
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiarahana amin'ny Micheal Platini
Ny fifamatorana misy eo amin'i Gianni Infantino sy Micheal Platini dia efa nisy hatramin'ny nipoahan'ny ekipa UEFA. Nandritra ny fivoriana filoham-pirenena Fifa voalohany tany Meksika, dia nampiseho ny fahazazany i Infantino;
"Nanaraka an'i Michel aho nandritra ny sivy taona tao Uefa, fito ho sekretera jeneraly. Amin'ny maha filohan'i UEFA ahy dia nanao zavatra goavambe izy sy izaho, amin'izao fotoana izao, tena te-hifantoka amin'ireo fahatsiarovan-tena tsara ireo aho. "
Na dia teo aza ny fiampangàna nopotehina tamin'i Platini, mbola mitazona ny fifandraisana akaiky amin'ny lehibeny teo aloha i Infantino ary ny fampiasana azy amin'ny fikarakarana azy. Manamarina ny asany izy amin'ny fanamafisana izany;
"Mihantitra amin'ny raharaha mifandraika amin'ny baolina kitra izy, saingy tsy voatery hiresaka amin'ny olona izy."
Gianni Infantino Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fifehezana ny fiteny maro
Infantino dia miteny tsy latsaky ny fiteny iraisam-pirenena amin'ny enina; Anglisy Italiana, Frantsay, Portiogey, Espaniôla ary Alemana. Ny polyglotte dia natoky ny fampisehoana ny fahalalany ireo fiteny ary nanolotra ny lahateniny voalohany ho filohan'ny FIFA taorian'ny fandreseny fifidianana.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Gianni Infantino momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.